Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. बारामा पर्ने राजमार्ग र सडकका अधिकांश पुल जीर्ण – Emountain TV
बारा, ३० भदौ । बारा जिल्ला अन्तर्गत पर्ने राजमार्ग तथा सडकका अधिकांश पुराना पुलहरु जीर्ण बनेका छन् । जीर्ण पुलमा दैनिक चल्ने सवारी साधनले पक्की जीर्ण पुलहरु झोलुङ्गे पुल झैँ हल्लिन्छन् ।
यहाँका पुलबाट सवारी साधन आवत जावत गर्दा ठुलै भुकम्प आए झै लाग्छ । यी पुलहरु समयमा नै पुननिर्माण नगरे कुनै समय ठूलै दुर्घटना निम्तिन सक्ने खतरा बढाएको छ ।
राजमार्गका पुलहरु जीर्ण भएकाले सवारी साधन चल्दा झोलुङ्गे पुल झैँ हल्लिन्छन् । हुनत राम्रो अवस्था मै भएका पुलहरु पनि केही त हल्लिन्छन् तर यहाँका पुलहरु धेरै नै हल्लिन्छन् ।
पूर्व—पश्चिम राजमार्गका अधिकांश ठुला पुलहरुको अवस्था पनि यस्तै छ । पहिले अगाडी पछाडी गरेर हल्लिन्थे भने केही वर्ष यताबाट तल—माथि हलिन्छन् । यसबाट पुलको अवस्थाकोबारे सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यसरी तल—माथि हल्लिनु, पुल जीर्ण भई सकेको संकेत हो । कति खेर पुल भाँच्चिने हो, र दुर्घटना निम्त्याउने हो ठेगान छैन । यही राजमार्ग अन्र्गत बारामा पर्ने बकैया पुल, पसाह पुल, दुधौरा पुल, १ नम्बर, २ नम्बर, ३ नम्बर पुल जीर्ण भई सकेका छन् ।
बकैया पुल बिगत ८/१० वर्ष देखि यसरी हल्लिन थालेको निजगढका स्थानीय रामप्रसाद अधिकारी बताउनु हुन्छ । यही राजमार्गको निजगढ—पथलैया सडकमा रहेको दुधौरा पुलको दुई पटक पिलर भासिसकेको छ । करिब ४० वर्ष अघि तत्कालिन सोभियत संघ रुसको सहयोगमा निर्माण गरिएको यी सडक, पुलहरु नेपाल सरकारले बेलैमा चाँसोका साथ मर्मत सम्भार गरेको पाइँदैन ।
पुलको भार वहन क्षमता भन्दा अत्यधिक ओभर लोड राखेर मालबाहक सवारी साधन गुडाउने र पुल भरी नंै यसरी एकै पटक सवारी साधनहरु ओहोर दोहोर गर्नाले पुल जोखिममा पर्दै आएको हो ।
शुरुका वर्ष ६ चक्काबाट १० चक्का, १२ चक्का, १४ चक्का हुँदै १८ चक्का, २४ चक्का भएका माल बाहक सवारीसाधनसँगै अत्याधिक लोड राखेर सवारी साधन र टिपरहरु गुडेपछि पुल र सडकको अवस्था कमजोर बन्दै गएको हो । अत्यधिक भार वहन रोक्न र सुधार गर्न राज्यले बेलैमा चासो नदेखाउँदा अहिले पुल र सडक जीर्ण हुँदै गएका छन् ।
त्यसैगरि डिभिजन सडक कार्यालयले सडकमा रहेको खाल्डाखुल्डी एका तिरबाट टाल्दै गए पनि अर्को तिरबाट भत्किदै जान थालेको छ । पुलको आयु लम्ब्याउनका लागि मर्मत सम्भारका कार्यहरु भने भईरहेका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालयले हरेक बर्ष पुलमा टालटुल गर्ने काम गर्दै आएको छ । यसरी पुराना तथा जीर्ण भएका पुलहरुको पुननिर्माण गर्न जरुरी छ । कुनै अप्रिय घटना घट्नु पूर्व नै पुलको अवस्था बुझेर मर्मतसम्भार या पुननिर्माण गर्न जरुरी छ । होइन भने व्यस्त रहने राजमार्गका पुलहरुको यस्तो अवस्थाले ठुलो दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।